လွဲတဲ့အခါလဲ လွဲပေမပေါ့ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ကျနော်တို့ လာလည်သွားပါတယ်။ အမြဲရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမ်ငယ်နေလို့ ဝင်ပြီး နှုတ်မဆက်ရဲတာပါ။ အိမ်သာယာလို့ ဧည့်သည်အလာများတဲ့အိမ်ဆိုတော့ မဝင်ရဲလို့ပါ။ ကျနော်တို့ဆီလာလည်ပြီး အားပေးစကားပြောသွား နှုတ်ဆက်သွားတဲ့အတွက် အထူး (အထူး) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်လည်း အမြဲဝင်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
ဟီးဟီး။ Online က သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ တွေ့ရင် ဒီလို ချည်းပါပဲ။
အမက ရေးတောင် ပြီးသွားပြီ။ မြန်လိုက်တာ ဟိ။ ခုပဲ အိမ်ပြန်ရောက်တယ် အမ။း)
အမရေ.. ထပ်ဖတ်ပြီးမှ အမတို့ ဖုန်းတွေဆက်တုန်းက လွဲတာကို အားနာလိုက်တာ။ တွေ့ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာ အမတို့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.. နော်။း)
ငါ့ညီမရယ် လွဲပြီး ပြုံးရတာ ဘယ်လောက် ပျော်ဖို့ ကောင်းသလဲ...း)
BTW - Heart Museum ကလည်း ကျောက်ခဲပဲ ဆိုတော့ ကျောက်ခဲဘလော်ဂါတွေ ဒီမှာ လာစုနေတာပေါ့...း)
း) ချိုသင်းရေ လင့်ပြန်တင်ထားပြီ
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဆိုလားပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီတသက်ရောက်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ အိုဘားမားက အလည်ခေါ်ရင်တောင် ခရီးစရိတ်မတတ်နိုင်လို့ စဉ်းစားရမယ်။ အစ်မတို့ပဲ လာခဲ့ကြတော့။
မမိုးချိုရေ လွဲပေမဲ့ စိတ်စေတနာအမှန်နဲ့လွဲတော့ ပြုံးစရာ ခင်စရာလေးတွေတောင်ဖြစ်သေးတယ်နော်..။ ဘလော့ဂါတွေဆိုတာလေတူလို့ခင်မိရင် တော်တော်ခင်တတ်ကြတာဗျ...။
ညီမ ချိုသင်း လွဲလို့ ရတာ..း)..
နို့မို့ ပို့စ် အသစ်ဖတ်ချင်မှ ဖတ်ရအုံးမှာ..း)...
Dear A Ma,
I love you, also your blog.
I love sayarkyi Tin Moe also his poems.
ဟင်း မနာလိုပါဘူးဆိုမှ ကြွားပြန်ပြီနော်။ သူတို့ ပဲ တွေ့ ကြပါ။ တွေ့ ကြပါ ။ လွဲမှာပေါ့ မနာလိုလို့ဒီဘက်ကနေ ရှာမတွေ့ ပါစေနဲ့ လို့ ထိုင်ဆုတောင်းနေတာကိုး ဟီးဟီး
အမ ကိုကျော့်အတွက် ဓါတ်ပုံအိုးလေးတွေ
လုပ်တဲ့အကြောင်းရေးပါလားလို့ ။ အခုအဲဒီအိုးတွေဘယ်မှာထားခဲ့လဲ။
ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်...
လွဲချင်တဲ့သူတိုင်း လွဲကြရတာ မှတ်လို့...
လွဲဖို့ ကံပါတဲ့သူတွေသာ လွဲကြရတာပါလို့ ပြောလိုက်ပါလေ...
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးရတယ်...လွဲနေကျဆို မလွဲရင် တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ အစ်မရဲ့..။
ညီမက လျှပ်ပြာပြာဆိုတော့ တစ်ခုခုလွတ်မကျသေးတဲ့နေ့၊
ခလုတ်မတိုက်မိသေးတဲ့နေ့တွေမှာ စိတ်ထဲတကယ် တွေးမိတာက "ငါ ဒီနေ့ဘာမှ မဖြစ်သေးပါလား"လို့။
p.s ရေးနေရင်းကို သတ်ပုံမှားလို့ အပေါ်ကောမန့် ဖျက်လိုက်ရတယ်.. :P:P
အန်တီချိုရေ လွဲလိုက်တဲ့အလွဲ.. အလွဲလေးတွေကိုကဖတ်လို့ကိုကောင်းနေတာပါ..။
ချိုသင်းရေ… ချစ်စရာအလွဲလေးတွေ ရင်းနှီးတဲ့အလွဲလေးတွေ ဖော်ရွေတဲ့အလွဲလေးတွေပေါ့… အမကတော့ ဘလော့ဂ်ကသူတွေကို အရင်ရင်းနှီးလက်စသူတွေကလွဲလို့မမြင်ဖူးသေးဘူး… ဒီကို လာလည်ဖြစ်ရင် ကြိုအကြောင်းကြားနော်… မလွဲအောင် ကြိုစီစဉ်ထားပေးမယ်… အင်း… တသက်စာအလွဲကလား… သူလဲအတူတူ ကိုယ်လဲအတူတူဆိုတော့ ကျေပြီပေါ့နော်… အဲဒီအလွဲလေးကတော့ ရင်ခုန်စရာအလွဲလေးပေါ့… တခုတ်တရ လှလှပပလေး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ…
ဟီး.. ဟီး မမလွဲတာကလည်း ရီစရာကြီး....
အင်း... လွှဲတဲ့အခါလည်းလွှဲပေမှာပေါ့...။ စာအရေးအသားတွေကို ကြိုက်လို့ လာလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကွန်မန့်မရေးသွားတာဘဲရှိတယ်၊
ထုံးစံ အတိုင်း တဟိဟိ နဲ့ဖတ်နေရတယ်။
နေအုံး..ရွှေဂျမ်းတို့..ဟတ်ဟတ် တို့.. မနာလိုဘူး။
ကျောက်ခဲတွေလည်း..အမေရိက လာလည်မှ အကုန် ကျောပိုးအိတ်ထဲ ကောက်ထဲ့ ပြစ်လိုက်မယ်။ အတော်ပေါတဲ့ ကျောက်ခဲတွေ..း))
ဒီလိုပဲ ဟိုလွဲလွဲဒီမှားမှားလေးတွေဆိုတော့ အပျင်းပြေတာပေါ့
တွေ့ချင်ဇောနဲ့ နံမည် အရင်းတောင် မမေးလိုက်မိတာ အဆူမခံရဘူးလား... တော်သေးတာပေါ့ တွေ့သွားလို့... ကိုကျော်ဝဏ္ဏ အတွက် တသက်စာ အလွဲကတော့ ကံထူးလွန်းလို့ပါလို့ ပြောလိုက်ပါ မချိုသင်းရေ...
မချိုသင်း ဘလောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ရတာ ပျော်စရာကြီး။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏက ပြန်မပြောဘူးလား။ ဒါငါ့ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံး အလွဲလို့။
ကျနော်တော့ မချိုသင်းကို အပြင်မှာတွေ့ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် မိုင်ထောင်ချီခရီးနှင်ရမယ့် သဘောရှိတယ်။ :)
ဂျမ်းကို ဂျမ်းတုံးခုပြီး တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့။
ပျော်စရာ အလွဲလေးတွေ ဖတ်ရင်းပြုံးမိတယ်..
၁၃ နှစ်တဲ့.. မထူးဘူးအမရေ.. တသက်တကျွန်း တခါတည်းချထားလိုက်.. ဟီးးး
အလွဲလေးတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ ဆုံတွေ့ ကြတာတွေကို ဖတ်ပြီး စိတ်ကြည်နူးသွားတယ်အစ်မ။း-)
အမရေ မြန်မြန်နဲ့ များများတဲ့လားဗျာ။ ရက်စက်ပါပေ့
အမက Heart Museum ရွှေဂျမ်း ဆိုတဲ့ နစ်ခ်နိမ်းတွေပြောလို့ ပြောရဦးမယ် အခုကျနော်တို့လည်း နာမည်အရင်းတွေကိုတောင် တခါတလေ မခေါ်ဖြစ်တော့ဘူးဗျ မဇနိရေ ကိုဇနိရေပဲ ခေါ်နေကြတော့တာ
အစ်မစာတွေ ဖတ်ပြီးရင် တစ်ခုခုတော့ ရင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့သလိုပဲ။
စာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ။
ကိုကျော့်ကိုလည်း ၁၃ နှစ်ကြာ သည်းခံနည်း မမချိုသင်းကို ပြောပြခိုင်းပြီး ရေးပေးပါလို့။
အဲလို လွဲတာလေးတွေနဲ့ဖြူဖြူထုံထုံလေးဖြစ်နေတာက
ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့အမြဲဖတ်ပြီး ပိုခင်မိတာ...။
ထုံထုံ= ( ပြောရမှာ အားနာတယ်..ကိုယ့်ဟာကိုသိ)
Today i read your old article about your house in rgn.After i reading this article, i understand that we cannot get this kind of help and friendship can not get outside of our country. Also more n and more miss to my home....
မချိုသင်းရဲ့ လွဲပုံလွဲနည်းများဆိုပြီး စာအုပ်တအုပ်လောက် ထုတ်ပါလား...
အမရဲ့ အလွဲတွေ ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီး.. :D နာမည်အရင်းတွေလည်း မသိကြတော့ တော်တော်တော့ ရီရမယ်..အမကို ရတာ ကိုကျော်ဝဏ္ဏက ကံကောင်းတာပါနော်.. ဟိ..ဟိ.. :P
အစ်မ တကယ်ပဲ အစ်ကို့ဘ၀က လွဲသွားတာလားဟင်။ :P
အမရေ အလုပ်ရှုပ်နေတာ နားလည်ပါတယ်.. မာမားအတွက်လည်း ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်.. အမတို့ က အရမ်းတော်ကြတယ်နော်.. ကောင်းကြီးတွေ အများကြီး ရဦးမှာ... အလုပ်ရှုပ်လည်း ခဏနားပါ.. ဘလော့တော့ မပိတ်ပါနဲ့ အခုတောင် နံမည်ပြောင်တွေ ခေါ်ရင်းတွင်တဲ့ အကြောင်း အမရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ရီနေတာ... အမစာတွေ ဖတ်ပြီး လူတွေ အများကြီး အတွက်ရသ မျိုးစုံ ခံစားမှုပေးနိုင်တာ တော်ရုံလူမလုပ်နိုင်ပါဘူး အမရယ်။ အီးမေး မသိလို့ ထပ်မန့်လိုက်တာ။
ဟားးးးဟားးးးးး အမရဲ့ ဘာဖြေရမှန်း မသိဘဲ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်နေတုန်းဗျ။
ဟီးးး...တွေးကြည့်ရင်ပျော်စရာကြီး.... မရွှေဂျမ်း LAလာတာတော့ မသိလိုက်ဖူး။ အမပြောမှသိရတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်တော့ သိတယ်ဗျ။ မဆုံတော့ မဆုံဖူးသေးဘူး။